Ahoana ny fomba hamerenana ny fampirimana fampidinana avy amin'ny Dock raha toa ka nofafantsika | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny fampirimana fampidinana avy amin'ny Dock raha nofafantsika izany
Rehefa misintona rakitra avy amin'ny Internet ianao, ny atiny rehetra diavoatahiry mivantana ao amin'ny fampirimana fampidinana, fampirimana ahafahantsika miditra mivantana avy amin'ny Dock, satria eo akaikin'ny fitoeram-bokatra io. Amin'ny fananana mandrakariva ny fampirimana eo an-tànana, tsy ilaina ny mizaha ny Finder mitady rakitra alaina na ny mahita fa kely sisa dia mameno rakitra ny birao, amin'ny tranga tsy ilaina. Ahoana anefa raha voafafa tsy nahy ny fampirimana fampidinana? Amin'ny alàlan'ny Finder dia azontsika atao ny miditra azy, saingy efa mitaky antsika hanao dingana mihoatra ny dingana iray izy io mba hialantsika amin'ny fahamehana.
Soa ihany, ity olana kely ity dia manana vahaolana tena tsotra. Ity vahaolana ity dia iray ihany izay azontsika ampiasaina mba hametrahana ao amin'ny Dock izay lahatahiry izay tiantsika hananana hatrany ary atsaharo ny fanokafana ilay Finder ratsy hiditra amin'ny lahatahiry mitovy. Raha hamerina ny fampirimana fampidinana ao amin'ny Dock dia tsy maintsy miroso toy izao isika.
Avereno amin'ny laoniny ny folder fampidinana
Manokatra ny Finder
Avy eo ianao dia mankeny amin'ny menio ambony ary tsindrio ny menio Ir. Avy eo tsindrio ny safidy firosoana.
Ny Finder dia hampiseho amintsika ireo lahatahiry rafitra natokana ho an'ny mpampiasa anay. Raha te hampiseho ny fampirimana fampidinana indray dia mila s fotsiny isikasafidio izy ary sintomy mankany amin'ny Dock, manokana ny faritra nisy azy teo aloha.
Raha vantany vao manatanteraka ity fandidiana ity isika dia ho hitantsika ny fomba miseho indray ny fampirimana fampidinana amin'ny toerana voalohany.
MacOS dia tsy mamela antsika hitady fampirimana ao amin'ny Applications Dock, Noho izany, ny fampirimana fampidinana sy ny fampirimana hafa izay tianay ampiana amin'ny Dock, dia tsy maintsy apetraka amin'ny ilany ankavanana, eo ambanin'ny tsipika mitsivalana akaikin'ny fampiharana farany aseho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny fampirimana fampidinana avy amin'ny Dock raha nofafantsika izany
tena tsara .. diso ny nanafoanana io fampirimana io ary nieritreritra aho fa very ny fampahalalana .. naveriko tamin'ny laoniny izay voalazan'ny lahatsoratra. Misaotra indrindra anao
Ataoko ireo dingana ireo ary miseho eo akaikin'ny fitoeram-pako indray ilay fampirimana. Ny olana dia talohan'ny nanesorako azy tsy nahy, ny fampirimana fampidinana eo amin'ny dock dia nampiseho lisitra miakatra miaraka amin'ireo farany indrindra ary ankehitriny dia misokatra ny varavarankely miaraka amin'ireo fisintomana rehetra tsy milamina ary tsy afaka miverina any amin'ny fampirimana voalohany an'ny fanjakana aho. Misy mahalala ny fomba fanovana ny fampirimana amin'ny dock Mac ve mba hamerenany lisitra ireo fisintomana vao haingana? Misaotra anao
Camila Andrea dia hoy izy:
Maniry aho raha nomen'izy ireo valiny ianao dia azonao zaraina amiko ity satria manana olana mitovy amin'izany aho ... pls
Mamaly an'i camila andrea
Ao amin'ny kisary napetraka teo amin'ny dock sy ny menio pop-up azy dia safidio ny safidy "Fan" eo ambanin'ny "View content as". Miarahaba.
Tsy nofafako ilay fampirimana, tsy tadidiko mihitsy. Nanjavona tsotra izao avy teo amin'ny dock aho. Amin'ny alalàn'ny fampahalalana nomeko, niditra tao amin'ilay izy aho ary nametraka azy teo amin'izay nisy azy taloha. Misaotra indrindra anao.
Pablo QM dia hoy izy:
Misaotra indrindra anao! Nofafako tsy nahy izany ary niaraka tamin'ny fanazavanao izao no nahitako ny kisary fampidinana tao amin'ny Dock indray!
Valiny amin'i Pablo QM
Misaotra indrindra anao! Tany Catalina no nataoko fa tsy nisy olana ... aprily 2020
Manampy ny hevitro aho herinandro roa lasa izay ... manana olana aho ... ankehitriny dia milahatra abidia ny fampirimana fa tsy manara-potoana ... tsy manompo ahy tsara izy ireo? Ahoana no hamerenako azy ireo indray?
Diso aho fa nofafako ilay fampirimana ary naveriko tao amin'ny Dock, saingy tsy afaka mamerina azy io indray aho, ka tsy afaka mahita na inona na inona. Afaka manampy ahy ve ianao? misaotra
Valiny tamin'i Amalia
Apetraho eo ambonin'ny fampirimana fampidinana ny totozy ary tsindrio ny bokotra totozy ankavanana. Aseho ireo safidy fampisehoana samihafa ary azonao atao ny mifidy ny maody Fan.
Famantarana tena tsara, efa nataoko izany ary niseho tao amin'ny Dock ny fampirimana fampidinana
ernesto alonso garcia nanambady dia hoy izy:
misaotra fanampiana tsara
Mamaly an'i ernesto alonso garcia casado
Misaotra, tendro manampy be
Beat The Game, namely ny Mac App Store androany